पललाई उच्च अदालतले सफाई दिने अन्तिम चरणमा ? – Annapurna Post News
पललाई उच्च अदालतले सफाई दिने अन्तिम चरणमा ?
April 23, 2022 sujaLeaveaComment on पललाई उच्च अदालतले सफाई दिने अन्तिम चरणमा ?
नवलपुर -आफूलाई अभिनेता पल शाहले कर णी गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेकी किशोरीले पूर्वी नवलपरासीको जिल्ला अदालतमा पनि आफ्नो बयान फेरेकी छन् ।
उनले अदालतमा दिएको बकपत्रमा गैंडाकोटमा एक वर्षअघि गीतको भिडियो छायांकनका क्रममा राति आफू होटल सञ्चालककी छोरीसँग बसेको बयान दिएकी छन् ।
यतिखेर उठिरहेको प्रश्न हो, ‘पीडित नाबालिगले अचानक किन बदलिन् बयान?’पललाई थाहा थियो, पीडित नाबालिगले उनलाई गहिरो प्रेम गर्थिन्। सरकारी वकिलसम्म बयान दिँदा पनि उनले यो भनेकी थिइन्। विश्वस्त स्रोतका अनुसार पलले आफू उम्किने कुनै विकल्प नपाएपछि पीडित नाबालिगको बयान फेराउन जेलबाट निस्किएपछि बिहे गर्ने आश्वासन नै दिएका छन्।
‘पीडितले अहिले पनि उनलाई माया गर्थिन्, पलले दुवैको करिअर बर्बाद गर्नुभन्दा मलाई बचाऊ। म बिहे गर्छु भनेर प्रस्ताव पठाएपछि उनी पग्लिएकी हुन्,’ पल निकट स्रोतले भन्यो, ‘पलले त पहिले पनि यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए तर यसपटक पलका बाआमा नै यो प्रस्ताव लिएर तनहुँ पुगेपछि बयान फेर्ने सहमति भएको हो।
यसै क्रममा बेलायतमा बस्ने सामाजिक अभियन्ता समाजसेवी इशा गुरुङले पनि आफ्नो फेसबुकमा लेख्दै भनेकी छन्, ‘तनुहु कारागार बाँट पल शाहको भिंडियों भर्खर सुने , मलाइ सपोर्ट र गाली गर्नेहरू प्रति धन्यबाद सत्यको जित हुन्छ ढिला चाडो’
यस घटनाको बारेमा पछिल्लो एउटा भिडियो रिपोर्ट तल हेर्नुहोस
खुशी हुँदै पोखरीमा गएकी अनुशाले सबैलाई धरधर्ती रुवाइन्, पोखरीबाट नै अ स्ताइन् ६ वर्षीया अनुषा
मतदानका लागि आठ दिनमा पाँच लाख बढीले छाडे काठमाडौं
अभिनेत्री मलाइकाको पहिरनमा के त्यस्तो देखिन्छ, जसलाई मानिसहरु छि थर्ड क्लास भनिरहेका छन् !